အိမ်မပြန်ခင် ၃ရက် အမှတ်တရ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Local Guides » အိမ်မပြန်ခင် ၃ရက် အမှတ်တရ
Posted by koaung on Dec 22, 2012 in Local Guides, Photography, Travel | 33 comments
အိမ်ပြန်ဖို့အားလုံးပေါင်းခွင့်၈ရက်ရခဲ့ပေမဲ့ မြန်မာပြည်မပြန်ခင်၃ရက်ကို ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းကိုမိသားစုသွားလည်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးထိုင်ဝမ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းကိုရောက်ခဲ့ပါတယ် ထိုင်ပေမှကီလို၆၀၀ကျော်ဝေးတဲ့ ကောင်းရှုံမြို့ကို
အရင်ရောက်ခဲ့ပါတယ် ပထမညကအဲဒီမှာဘဲ အချိန်ကုန်ခဲ့ပါတယ်ဇနီးဖြစ်သူရဲ့ညီမအိမ်ပါ နောက်တနေ့မနက်မှာ ကား၂စီးနဲ့ ဆောက်ပြီးခါစမြို့ပြဖြစ်တဲ့ ကောင်းရှုံ(အိတမြို့) ကိုသွားခဲ့ပြီအဲဒီကဟိုတယ်မှာ ဒုတိယညပေါ့
ဆောက်ပြီးကာစမြို့ပြဆိုတော့ ကြည့်ရတာအားလုံးဟာ လှပသပ်ရပ်နေပါတယ် ကလေးတွေကတော့ခရီးထွက်ရတာကိုဘဲပျော်နေကြပါတယ် ဗဟုသူတအနေနဲ့ရှိတဲ့ဓတ်ပုံလေးတွေတင်ပေးလိုက်ပါတယ်
နောက်တနေ့မနက်တတိရနေ့မှာ ကန်တင်းမြို့ကိုခရီးဆက်ခဲ့ပါတယ်ကီလိုမီတာ၆၀ခံ့ဆက်သွားရပါတယ် အဲဒီမှာပင်လည်ဝပေါ့
တည်းခဲ့တဲ့ဘန်ဂလို ၂ယောက်ခန်းတခန်းကိုတည ဒေါ်လှ၁၅၀
မြန်မာပြည်မပြန်ခင်၃ရက် ထိုင်ဝမ်တောင်ပိုင်းခရီးဖြစ်ပါတယ် ကျန်းမာကြပါစေ
ည ဝီဝီ နဲ့တွဲ ဖို့ 
အန်ကယ်ကိုအောင့် ငါးကြော်များကို မသွားပါကြောင်း
သမီးလေးတွေလည်း မတွေ့ပါလား ကျောင်းဒကာဂျီးရဲ့…။
ကိုအောင်ရေ တိမ်မြင်ကွင်း ဓါတ်ပုံကြည့်တာနဲ့ ၀သွားပြီဗျ
မြန်မာပြည်ပြန်လာလို့ ပိတ်ရက်အရှည်ကြီး ရတယ် ထင်နေတာ။
ပိတ်ရက် ၈ရက်ကို ကျိုက်ထီးရိုးအထိရောက်တယ်ဆိုတော့…
5star hotel တစ်ည ဒေါ်လာ 170 ဆိုတော့ မဆိုးဘူးပေါ့နော်။
ဒီက ဆီဒိုးနားတိူ့ ထရိတ်ဒါးတို့လည်း အဲဒီလောက်ရှိမယ်။
MaMa & Sayarmagyi padonmar လေးစားရပါသော မမနှင့် ဆရာမကြီး ပဒုံမာ ခင်ဗျား တနေ့လုဎ်မှတနေ့စားရတဲ့ ဘဝမို့ (ကွန်မန်ဒါမို့) ခွင့်ယူရတာမလွယ်တာမို့ ဒီလိုကလေးတွေနဲ့ ဒီမှာကောမြန်မာပြည်မှာပါဆွေပြမျိုးပြ အပြေးအလွှား စီစဉ်ရတာပါဗျာ ကျည်ဆံရထားကထိုင်ပေက
ကောင်းရှုံ ကို၁နာရီခွဲဘဲကြာပါတယ် အချိန်ကုန်သက်သာတာပေါ့နော် ပထမချောင်းသာပါသွားမလို့ မိုးရာသီမို့မသွားဖြစ်ဘဲ အမေ့အနားမှာဘဲနေဖြစ်ခဲ့ပါတယ် အဲဒါကဘဲခပ်ကောင်းကောင်းဖြစ်သွားတယ် အခုအချိန်အမေဟာ စကားပြောဖို့တောင်အားရှိပုံ မရ ဆေးရုံကပြန်ဆင်းလာပြီး ဦးဝိစာရလမ်းကအိမ် ကိုပြန်ရောက်လာပါပြီ
ဆရာမကြီးခင်ဗျာ ၅စတား ဟိုတယ်တွေ ကျနော်သိပ်မနှစ်သက်ဘူးဗျ အိမ်ကအိပ်နေကျ ဂေါင်းအုမ်းမာမာနဲ့ မွေရာမပါတဲ့အိပ်ရာကိုဘဲနှစ်သက် အလေ့အကျင့်ဖြစ်တတ်တယ် ဆံထုံးနောက်ရောင်ပါ လေ သူတို့မောင်နှမတွေစီစဉ်တာမို့
လိုက်သွားရတာပါ ကိုယ့်ဘာသာဆို ဒီပိုက်ဆံကိုလှူဘို့ဘဲစဉ်းစားမိမှာ သွားတော့လဲဝါသနာအရ ဒါ့ပွန်ရိုက်ဖြစ်တာပါဗျာ မြို့သစ်သာလုဎ်ထားတယ် တချို့နေရာတွေမှာ တန်းလန်းတွေ (ထင်သလိုမဖြစ်လို့ရပ်ထားပုံရတယ်)
ဆီဒိုးနား ဈေးနှုန်းလေးပါဗျ..ထရိတ်ဒါးကို မပြောသေးပါဘူး…http://www.agoda.com/asia/myanmar/yangon/sedona_hotel_yangon.html?asq=J%2fLRkf9a651d7YVW7sQLn9g3%2b6A21j9G47dGj0rbk1C%2fwmhs3TFSbnJwAoQRka1Vy39%2fpqa0%2b49JBhXybUiSbUnFAmAscqqTsSBIzDrXfKVxWapI8liZR9LPEJc0H9wkFu1cckvOMbQEglLFHMES7dD%2fGaUTBv37iMApAPOw1Yc%3d
aanyar thar ရေကျေးကျေးနော် ဈေးကြီးတယ်နော် အင်တာနေရှင်နယ်ဈေးနဲ့တော်တော်လေးကွာနေတယ် ဟိုတယ်တွေမှာရင်းနှီးရင်ရင်းနှီး သလိုဈေးချတာတွေလဲရှိတယ် အမေရိကမှာ သူကြီးသွားမဲ့ဟော်တယ်ဈေးတွေ့လား သူတို့ဈေး
နဲ့ပြောရငလည်း ကွာတာပေါ့နော် နှစ်သစ်ကူးဆိုဈေးအကြီးဆုံး နေရာတောင်ဘုက်လုဎ်လို့မလွယ်ပါ (ကြုံတုံး ဟော်တယ်မှာ ခေါက်ဆွဲဘူးစားသူများသတိထားပါဗျိုး မတော်ဘူးမှောက်ပြီး အဆမတန်ရော်လိုက်ရတဲ့လူတွေတွေ့ဘူးလို့ပါ)
အခန်းထဲမှာအစာပြေအလွယ်တကူစားရင်း ဟော်တယ်မှကော်ဇောပေါ်မှောက်ကျသွားလို့ မှတ်ပါ
စနေနေ့ (၂၂)ကနေ.. နောက်နှစ် ၁ရက်နေ့အထိ.. ရုံးပိတ်သွားပါပြီ..
ဆန်ဖရန်ကို.. ပစိဖိတ်ကမ်းရိုးတမ်းတလျှောက်ကနေ.. ကားနဲ့သွားမလို့ပြင်တာမှာ.. ဆန်ဖရန်နားက Marriott Hotelကို.. တည၁၂၀တန်.. အသိတယောက်ကမိတ်ဆက်ပေးတာမို့.. ကုဒ်နံပါတ်လေးထည့်.. ဘွတ်ကင်လုပ်တာ.. အခွန်အပြီးအစီး ၇၅နဲ့ရတယ်..။
ဆန်ဖရန်ရယ်.. နပလို့ခေါ်တဲ့..၀ိုင်ထွက်တဲ့နေရာရယ်ကို.. လည်လည်သွားမယ်..
အဘဖောနဲ့.. ကိုအောင်တို့ကို.. အားကျလာလို့..။
သမီးချောတွေပုံတင်ထားရက်နဲ့.. ကိုရင်ကြောင်ကြီး..ကြောင်တောင်ကန်းသလား.. ပုံကနောက်ကလိုက်လာတာလား.. တွေးနေမိပါရဲ့..။
ဆရာသူကြီးခင်ဗျား ဆရာဓတ်ပုံများစောင့်နေတာကြာပေါ့ ကင်မရာမှိုတတ်သွားမယ်နော ဆရာ့ရဲ့တောလားကိုစောင့်နေပါမိအကြောင်း
” Marriott Hotelကို.. ဘွတ်ကင်လုပ်တာ.. အခွန်အပြီးအစီး ၇၅နဲ့ရတယ် ”
သူကြီး တို့ အမေရိက နေသူများ ၊ ကံကောင်းလှပါတယ် ။ တကယ် ။
ကုန်ဈေးနှုန်းတွေ သက်သာအောင် ၊
အစိုးရ ဘယ်လိုများ လုပ်ထားလဲ မသိ ။
Sydney မှာ New Year မီးပန်း မြင်ရမယ့် Hotel တွေ
New Year eve ည အတွက် ဒေါ်လှ ၅၀၀ အောက် မရှိဘူး ။
မနေ့က ကျနော် ကြည့်တုန်းကလည်း အဲ့ ညီမလေးတွေ ပုံ တွေ မတွေ့ဘူး။
တိမ်နဲ့ ကျောက်ဆောင် ပုံတော့ အတော် သဘောကျသဗျာ။ လွမ်းစရာ။
မခိုင်ဇာခင်ဗျား ပထမလူပုံမပါပါ (ကျနော့သမီးတွေသူတို့ပုံတင်တာသိရင်ဆဲခံရမှာ ကြည့်ပါလားဗျာ ဓတ်ပုံရိုက်တာတောင်မိုက်ကန်းကန်းနဲ့ )(အဖေနဲ့တူလို့နေမှာ) ကိုကြောင်ကြီးသူငယ်နာယောဂါသက်သာအောင် တင်လိုက်တာ
ကိုပေ အဲဒီငါးကအသားနုပြီး အရိုးနဲတယ်ဗျ ကျော်စားတာမှကောင်းတာဗျ ဘီဘီနဲ့အလိုက်ဆုံး
ဦးကြောင်ကြီး ဒူးတော့မချောင်ပါရစေနဲ့ စက်ဘီးအမြဲစီး နေရလို့
တမီးလေးတွေကလည်း ဘယ်နှယ် ရေထဲဆင်းတာ ဘောင်းဘီလက်ရှည်ဂျီး ဝတ်ရသလား… အဲလိုလုပ်နဲ့လေ… လွတ်လပ်တဲ့တိုင်းပြည်မှာ လွတ်လွတ်လပ်လပ် နေကြပါ။ ဦးကြောင်ကြီးဆို ဟောင်းလောင်း… (how long)
ဘယ်လောက်ရှည်သလဲဆို (အသက်ပြောတာနော်) ၁၂၀ရှိပြီ။ အဲဒါ လွတ်လပ်ပေါ့ပါးစွာနေခြင်း အကျိုးပေါ့….။
ဪကျေးဈဇူးတော်ရှင်ကြီး ကိုကြောင်ရယ် အဖေကိုကုသိုယ်ရအောင်သမီးတွေကိုလေလံတင်ခိုင်းနေတာလား ကျနော်လူပေါင်းမှားတာပါဗျာ ဒါနဲ့အတက်က၂၁၀ဟုက်ဝူးလား ၁၂၀လား ဒါဆိုတော်တော်တိုမှာနော့ (oh!!! my kidding)
သမီးလေး တွေကတော့ အချောစားလေးတွေဘဲ ကိုအောင်ရေ။
တိမ်တွေတောက်နေတာကလဲ လှ၊ ငါးကြော်ကလဲ သွားရည်ကျစရာ။
ကကြောင်ကြီး တို့များ ကိုယ်နဲ့ ဆိုင်ရာ ငါးကြော် ကိုတော့ မငမ်းဘူး။
သူကြီး ရဲ့ တောလား ကိုလဲ မျှော်နေပါတယ်။
US ကို သွားလည် ဖို့တော့ အိမ်မက်တောင် မမက်နိုင်တဲ့ ဘဝ မို့ သူများ ပုံတွေ ကြည့်ပြီး သာ ရောက်ဖူး လိုက်တော့မယ်။ :harr:
ဗီဇာကလည်း.. အင်္ဂလန်ကဆို.. မခက်ပါဘူး.။
ဆရာအောင့်ပုံနံပါတ်၎ က.. တိမ်က.. အတုကြီး..
အဟမ်း သများကတော့ Canon EOS 1100 D အသစ်စက်စက်နဲ့
်ဝယ်သာဝယ်လိုက်ရတယ် Function တွေ ဘာမှ မသိလို့ စမ်းတ၀ါးဝါးဖြစ်နေပါတယ်။ manual တွေ ဖတ်ဖို့လည်း ပျင်းနေလို့ ကူနိုင်သူများ ကူရင်ကောင်းမှာ ဟီး ။
နယူးရီးယား အပြန် အပြိုင်အဆိုင် တင်ကြတာပေါ့နော်။ပုံထွက် မလှလို့ကတော့ မတင်ဘူး ။
ကိုအောင်ရေ ကမ်းခြေက ဇောက်က သိပ်ပြီး ရေဆော့ဖို့ အဆင်မပြေဘူး မှတ်တယ်။ လှတော့လှတယ်။ ကျမကကမ်းခြေဆို ပြန့်ပြီး သဲတွေနဲ့ ဆော့ရတာမျိုးကို ပိုသဘောကျတယ် ။
ကျမနောက်နှစ်ထဲ ရောက်ခဲလှတဲ့ ပြည်တွင်းခရီးတခုကို အားခဲထားတယ်။
ဝေးလံခေါင်သီတဲ့ အရပ်ပေါ့ ။ သို့သော် သဘ၀တရားရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်တွေ တူးဖော်ခွင့်ရှိမဲ့ နေရာပေါ့ ။ ကျန်းမာရေးကောင်းအောင် သေချာလေး ထရိန်းလုပ်ဖို့ စဉ်းစားနေတယ်။
Me: သြော် ကုန်အုန်းမယ် တယောက်တော့လာပြီ ကင်မရာအသုံးအဆောင်လေးပါ မဝယ်တော့ဘူးလား
နောက်တာပါဗျိူး ပင်လယ် ဝကအရှည်ကြီးဗျ အဲဒီနေရာကရေငုတ်တဲ့နေရာဗျ သဲဖြူနေရာလည်း
ရှိပါ့သွားတော့သွားချင်သား ဘီကီနီလေးတွေနဲ့အရောင်စုံဘဲ ပြောကိုပြောချင်ဘူး ဘေးမှာနဂါး
မျက်စောင်းအကြောင်း မရွေးတဲ့ ချစ်မညီးတဲ့ ချစ်ဇနီးက ရှိနေတော့ ပင်လယ်နဲ့ တောင်တွေဘဲလှည့်
ရုိုက်နေရတာ နေအဝင်ရိုက်တာ တနာရီကျော်ကြာလို့ညကျဒေါ့ ကားပိတ်ပြီး ဘန်ဂလိုမှာ ခေါက်
ဆွဲဘူးနဲ့ကျေနပ်လိုက်ရတယ် တံတားကိုရိုက်ဘို့ လည်းတနာရီလောက် သွားရတယ် အစက
ပုံတွေမတင်တော့ ဘူးလို့ နေတာ ပင်ပန်းတာတွေ အမှတ်ရပြီးအားလုံး မျက်စိနေုာက်အောင်တင်
လိုက်တာ သည်းခံအားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအထူး တင်ပါကြောင်း.
ဟုတ်တယ်သူကြီးခင်ဗျား ဓါတ်ပုံကအဆောက်အဦး အတွင်းပိုင်းမှာရိုက်ထားတာ ဘယ်လိုလုပ်ထားသည်မသိ
လှပသောအရောင်များထွက်နေပါ၏ အဲဒီအထဲမှာဈေးကြီးတာတွေ ရောင်းတာဗျရိုးရက် နာရီ အယ်ဗီအိတ်
Me: မလတ်ခင်ဗျားသူကြီးက တောမလားခင် လူလားနေတယ် အယ်အေမှာ မုန့် ညင်းခါးချက်ခိုင်းမလို့ တဲ့.
ဟိုတယ် ကို ရိုက်ထားတာ ကြည့်ပြီး သိပ်သဘောကျမိတယ်။
ဟိုတယ် တည်ဆောက်ပုံ ဒီဇိုင်းလေးက ငါးကြော် လေး ထက် ပို စိတ်ဝင်စားဖို့ သိပ်ကောင်းနေတယ်။
ငါးကြော်လေးလည်း စားကောင်းမယ် ထင်တယ်နော်..
: မဆူးခင်ဗျား ကျေးဇူးပါနော် ပရဟိတကိုလူငယ်ပေမဲ့ လေးလေးနက်နက် အားထက်သရောလုပ်ဆောင်
ဦးကိုအောင်ရေ သမီးလေးတွေက ချစ်စရာကောင်းပါ့
Happy Holidays!! ပါနော်
မိခင်လည်း ပြန်လည်ကျန်းမာလာတာ ဝမ်းသာပါတယ်ရှင့်..
Me: မိုးဇက်ရေ အမေတူလို့ ဖြစ်မှာ အဖေတူရင်မစွံဘဲနေမှာ အားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါနော်
ဦးရေ.. ထိုင်ဝံကို ရောက်ဖူးချင်ပါဒယ်ဗျာ..
ကမ်းကပ်ရင် လာတွေ့လို့ရမလား ဦးအောင်ရေ…
ထိုင်ဝံမှာ မလိုင်ဆံလေးများ ရမလားလို့လေ…
ကိုရင်စည်သူရေ ထိုင်ဝမ်မှာလာလည်လို့ရပါတယ် ကျနော်ကအွန်လိုင်းမှာ၂၄နာရီရှိပေမဲ့အိမ်မှာ၄၂နာရီ မရှိတတ်အောင် အလုဎ်များတတ်လို့ ငယ်သူငယ်ချင်းများ(သင်းဘောသီးများတောင်ဖုံးနဲ့ပဲစကားပြောဖြစ်တယ်) ဒီမှာငှက်ပျောတုံးပေါတယ်
ဦးလေးရေ.. မှတ်မှတ်ရရ ထိုင်ဝံမှာ ကွမ်းစားခဲ့ဖူးတယ်..
ထိုင်ဝံမလေးတွေ ဘစ်ကနီလေးတွေနဲ့ရောင်းတာလေ… အူးလေးတော့သိမှာဘော့
လှလိုက်တာနော်။ ရိုက်ချက်လေးတွေလည်း အရမ်းမိုက်တယ်။
Building တွေရဲ့ lighting အယူအဆတွေ အရမ်းလှပါတယ်။
ဟင်းပွဲလေးရဲ့ presentation လေးကလည်း အတုယူဆရာပါ။
ကိုရင်စည်သူရေ ကျနော်လည်းရောက်ခါစတနှစ် နီးပါးစားဘူဘူးတယ် မကောင်းတာသိလို့အခုတော့မစားတော့ဘူး အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါဗျာ
TheWinner ခင်ဗျားအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါနော် အပေါ်ကပုံတွေကခရီးသွားရင်းအမှတ်တရရိုက်ရတာပါ အောက်ဆုံးကဟင်းပုံက ကြော်ညာအတွက်သုံးဖို့ စမ်းသပ်ပုံများဖြစ်ပါတယ် တကယ်သုံးခဲ့တဲ့ပုံတွေဟာလည်းကျနော်ရိုက်တာကိုအရွေးခံရလို့ ဝမ်းသာခဲ့ရပါတယ်(အတူတူရိုက်တဲ့လူတွေက ထိုင်ဝမ်လူမျိုးဖြစ်ပြီး ဒီကကျောင်းဆင်းတွေဖြစ်ပါတယ်)
blackchaw ကျနော်က ဆရာ့လိုစာကောင်းကောင်းမရေးတတ် မြန်မာပြည်ဗဟုသုတကလည်း အားနည်းတဲ့လူပါဗျာ ဆရာချောကိုမှီဘို့အများကြီးလိုပါသေးတယ် ကိုရင်စည်သူတို့ ဆရာချော ကိုသစ်မင်း ကိုနိုဇိုမိ သူကြီး စာတွေဖတ်ပြီးဒီရောက်လာတာပါဗျာ ဓတ်ပုံကထင်သလို မပြည့်စုံသေးပါဘူးဗျာ ကျိုးစားနေဆဲပါဗျာ မန်းတလေးဂဇက်လာပြီးမှ ဒတ်ပုံပိုးဝင်သွားတာပါ သည်းခံအားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါနော